သင်၏ Mac screen ပေါ်ရှိမည်သည့် pixel ၏ RGB သို့မဟုတ် hexadecimal တန်ဖိုးကိုကြည့်ရသနည်း ငါက Mac ကပါ
သင်၏ Mac screen ပေါ်ရှိမည်သည့် pixel ၏ RGB သို့မဟုတ် hexadecimal တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်
RGB, ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာ, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အရောင်ဖော်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်း ကွန်ပျူတာမော်နီတာများကအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရောင်တစ်ခုစီ၏ကိုယ်ပိုင် RGB တန်ဖိုးရှိသည်နှင့်၎င်းသည်ဤအရောင်သုံးမျိုးကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်သင်ကြည့်နေသောအရောင်အမျိုးအစားကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုရှိသည်။ ဤ RGB တန်ဖိုးများကိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်းအများစုမှာအလုပ်လုပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည် ဓာတ်ပုံနှင့်ပုံရိပ်များ၏ထုတ်ဝေ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှင့်အတူကစားနိုင်ပါသည် ဂရပ်ဖစ်နှင့်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်.
မိမိအ၏အနည်းငယ်လူသိများအင်္ဂါရပ် မက် သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်မှာမီတာတစ်လုံးပါ ၀ င်သည် RGB နှင့် screen pixel ၏ hexadecimal အရောင်ကိုခွဲခြားနိုင်သည် သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ သင့်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာသင်၌ရှိသည်နောက်ခံပုံ, ဤသင်ခန်းစာတွင်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
1 သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ရှိမည်သည့် pixel မဆို RGB တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ။
2 hexadecimal format နဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ရှိမည်သည့် pixel မဆို RGB တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ အရောင်တစ်မျိုးတည်းတွင်သင်ဖြစ်စေပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည် Adobe က Photoshop ကို o Pixelmatorသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်နိမ့်ကျအောင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါကရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ pixel တစ်ခု၏ RGB တန်ဖိုးများကိုသင်ရှာဖွေနေသည့် color effect များရရှိရန်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
သင့် Mac မှာအသုံးဝင်တဲ့ Utility တစ်ခုပါရှိပါတယ် 'ဒီဂျစ်တယ်အရောင်မီတာ'နှင့်တွေ့နိုင်ပါသည် Launchpad> အခြားသူများ အထိုင်မှတဆင့် (အပေါ်ပုံတွင်သင်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း).
လျှောက်လွှာကိုစတင်ပြီးနောက်, သင်ညွှန်ပြသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းကိုဆွဲယူနိုင်သည်, ၎င်းသည်ညွှန်ပြသောwhichရိယာ၏ကျယ်ပြန့်သောမြင်ကွင်းကိုပြသလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင်တိုင်းတာနေသောအတိအကျဖြစ်သည်၊ အမျိုးအစားစုံကိုရွေးချယ်ပါ ဇာတိအဖြစ် P3, sRGB, ယေဘုယျ RGB, Adobe RGB, Ly *a*b*.
ဒီဥပမာမှာငါအရောင်ကိုတိုင်းတာနေပါတယ် RGB ၏ desktop ပေါ်မှာပုံမှန်အားဖြင့်လာသည်ဟု Wallpaper တောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ OS X ကိုအယ်လ် Capitan.
သင်မြင်သည့်အတိုင်းတန်ဖိုးများသည်အနီရောင် ၈၈၊ အစိမ်း ၃၃ နှင့်အပြာရောင် ၄၀ ဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုတန်ဖိုးများကိုတူညီသောလျှောက်လွှာတွင်သုံးနိုင်သည်။ Adobe က Photoshop ကို o Pixelmator ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရန်တူညီသောအရောင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်။
hexadecimal format နဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
RGB display သည်ရေခဲတောင်၏အစွန်အဖျားဖြစ်သည် 'ဒီဂျစ်တယ်အရောင်မီတာ' သင်၏ Mac ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းအတွက်အသုံးဝင်သော hex color တန်ဖိုးများကိုရယူရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ဝဘ်ဒီဇိုင်နာများ သူတို့ကိုသုံးပါ CSS ကို y HTML ကို ပုံမှန်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ၊ developer တစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်နေရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ငါများသောအားဖြင့်ဘရောင်ဇာများတွင် extension များအသုံးပြုသည် ငါ့အဘို့ဤငွီးငှေ့ဖှယျအလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်။
တန်ဖိုးများမှပြောင်းလဲပစ်ရန် စံဒdecimalမ RGB hexadecimal တန်ဖိုးများအတွက်သင် tool ကိုနှိပ်ပါ 'ဒီဂျစ်တယ်အရောင်မီတာ' သင့် menu ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ပြောင်းရန်ကိုနှိပ်ပါ ပြသ > သင်သည်တန်ဖိုးများကိုပြသသည်။ hexadecimal system ဖြင့် ဒီ format နဲ့ဖို့တန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများမှအပနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးပြုမည့်အင်္ဂါရပ်မဖြစ်သော်လည်း 'ဒီဂျစ်တယ်အရောင်မီတာ' ၎င်းသည် OS X တွင်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ utilities ဖိုလ်ဒါကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာစူးစမ်းမချင်းကျွန်ုပ်မူလကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Soy de Mac စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက်မျှဝေပါ။ ငါရှာတွေ့သောအခါ, ငါကတည်းဖြတ်ရန်အဘို့အစဉ်မပြတ်ငါကိုစတင်အသုံးပြုသည်, အဓိကအားဖြင့်အရောင်အဘို့, ဒါဟာအထူးသဖြင့်ဤ website တွင်ငါအသုံးပြုသောပုံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်တိုက်ဆိုင်။
ပစ္စည်းများကို System Preferences Menu မှဝှက်ခြင်း.
Mac App Store မှလာသည့်တိုင်မည်သည့် application ကိုမဆို Mac တွင် run ပါ.
ရိုးရိုး keyboard shortcut ဖြင့်သင်၏ browsing history ကိုဝင်ရောက်ပါ.
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်၏အသုံးပြုမှုကိုတစ် ဦး အသုံးပြုမှုရှိပါတယ် အတော်လေးကန့်သတ်နှင့်သာမန်အသုံးပြုသူအတွက်၎င်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အသုံးမကျပါ ဒီဇိုင်းနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများ ဒါဟာအတော်လေးကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိရန်ဘယ်တော့မှမနာကျင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ Mac screen ပေါ်ရှိမည်သည့် pixel ၏ RGB သို့မဟုတ် hexadecimal တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်
Mini ပြက္ခဒိန်၊ OS X အတွက်အချိန်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်
CarPlay သည်မော်ဒယ်များပိုမိုရောက်ရှိသည်။ ဤအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူ Hyundai မှဖြစ်သည်